တကိုယ်ရည် နည်းပညာဆိုင်ရာ – MyME
Category: တကိုယ်ရည် နည်းပညာဆိုင်ရာ
Week-13: Value – တန်းဖိုး
ဆရာ/မ မူစေးခလိန်၊ မြတ်သူနိုင်၊ ဇင်မေထက်၊ အိုက်ဆင်း အတန်း ဘာသာရပ် Life Skills ခေါင်းစဉ် တန်းဖိုး နေ့စွဲ သင်ခန်းစာ၏ရည်ရွယ်ချက်များ သင်ခန်းစာအပြီးတွင် ကျောင်းသားများသည် – တန်ဖိုး၏အဓိပာယ်အမျိုးမျိုး ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်တတ်စေရန် (အထူးသဖြင့် ငွေဖြင့်ဝယ်၍ရသောအရာ၊ ငွေဖြင်ဝယ်၍မရသောအရာများ)။ – လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတန်ဖိုးထားသောအရာများမတူညီကြောင်းကိုသိရှိစေရန်။ – မတူညီသောတန်ဖိုးထားမှု ရှိခြင်းသည် ရပ်တည်ရန်ခက်ခဲကြောင်း – လက်တွေ့သင်ခန်းစာမှတဆင့်ခွဲခြားဖေါ်ထုတ်တတ်စေရန်။ – မိမိတန်ဖိုးထားမှုများအပေါ် အများက သဘောတူမှုမရှိသော်လည်း – ထိုအမြင်များအပေါ်တွင် ရန်လိုရန်မသင့်ကြောင်းနှင့် – တန်ဖိုးထားမှုများမတူညီကြောင်းကို နားလည်လေးစားပေးတတ်စေရန်။ လိုအပ်သောပစ္စည်းများ မဂ္ဂဇင်းစာရွက်များ၊ ရောင်စုံခဲတံ၊ ရောင်စုံစာရွက်၊ စာရွက်ဖြူများ၊ ခဲတံ အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း ဆရာ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ ကျောင်းသား၏လုပ်ဆောင်ချက်များ ၅ မိနစ် ဆရာမှ ပြီးခဲ့သည့်သင်ခန်းစာ (အမှားကိုဝန်ခံခြင်း) Read more about Week-13: Value – တန်းဖိုး[…]
Posted in တကိုယ်ရည် နည်းပညာဆိုင်ရာ Leaveacomment
Week-12: Admiting Mistake – အမှားဝန်ခံခြင်း
ဆရာ/မ မူစေးခလိန်၊ မြတ်သူနိုင်၊ ဇင်မေထက်၊ အိုက်ဆင်း အတန်း ဘာသာရပ် Life Skills ခေါင်းစဉ် အမှားကို ဝန်ခံခြင်း နေ့စွဲ သင်ခန်းစာရည်ရွယ်ချက်များ သင်ခန်းစာအပြီးတွင် ကျောင်းသားများသည် လူတိုင်းမှားတတ်ကြောင်း၊ အမှားမှသင်ယူတတ်ရန်အဓိကလိုအပ်ကြောင်းကိုသိရှိစေရန်။ အမှားပြုမိပါက ဝန်ခံတတ်စေရန်နှင့် မိမိအမှားကို တာဝန်မယူပါက ရလာနိုင်သော အကျိုးဆက်များ အကြောင်းကိုသိရှိစေရန်။ လိုအပ်သောပစ္စည်းများ Case studies and flip charts. အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း ဆရာ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ ကျောင်းသား၏လုပ်ဆောင်ချက်များ ၁၀ မိနစ် – ဆရာမှပြီးခဲ့သည့်သင်ခန်းစာ (တာဝန်ယူခြင်း) အကြောင်းကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်။ – ထို့နောက်ဆရာမှ “တူညီတဲ့အမှားကို နှစ်ခါမလုပ်မိစေနဲ့ “ စာတန်းကိုသင်ပုန်းပေါ်တွင်ရေးပါ။ ထို့နောက်ကျောင်းသားများကို ထိုအဆိုအမိန့်အကြောင်းကို Read more about Week-12: Admiting Mistake – အမှားဝန်ခံခြင်း[…]
Week-11: Responsibility (2) – တာဝန်ဝတ္တရား
ဆရာ/မ မူစေးခလိန်၊ မြတ်သူနိုင်၊ ဇင်မေထက်၊ အိုက်ဆင်း အတန်း ဘာသာရပ် Life Skills ခေါင်းစဉ် တာဝန်ဝတ္တရား (၂) နေ့စွဲ သင်ခန်းစာရည်ရွယ်ချက် သင်ခန်းစာအပြီးတွင် ကျောင်းသားများသည် တာဝန်နှင့်ယုံကြည်ခံရခြင်းတို့ ဆက်စပ်နေပုံကို ကွဲကွဲပြားပြားသိစေရန် သင်ခန်းစာအပြီးတွင် ကျောင်းသားများသည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် တာဝန်ကျေသောသူတစ်ယောက်မည်သို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိရှိစေရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ (1). Case Studies (2). Whiteboard (3). Newspapers (4). Glue (5). A4 papers အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း ဆရာ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ ကျောင်းသား၏လုပ်ဆောင်ချက်များ ၅ မိနစ် ပြီးခဲ့သည့်သင်ခန်းစာကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးရန် (တာဝန်ဆိုတာဘာလဲ၊ တာဝန်ယူခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက် နဲ့ တာဝန်မယူခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်က ဘာလဲ) ၁၅ Read more about Week-11: Responsibility (2) – တာဝန်ဝတ္တရား[…]